U Iibso Ubax Garab -Tulle Dharka Cad ee Dheer ee Gabdhaha - Maraakiib Bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
Ubaxa Ubax-Tulle Dharka Cad ee Dheer ee Gabdhaha
dib u eegista 35
$ 16.99 qiimaha joogtada ah $ 23.99
Qadarka Kidaanka 3T 4T 5 6 7
Dharka Ubax Tulle Dharka Cad ee Dheer ee Gabdhaha - 3T gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Waxyaabaha: Cudbi, Polyester
Dharka Dhererka: Mid-Dhal
Koolaar: Koolar laba jibbaaran
Nambarka Tusaalaha: 65123
Gabdhaha Stylish Princess Leace Labiska
Sannadaha 2-3: Bust 48cm, dhererka 54cm
Sannadaha 3-4: Bust 50cm, dhererka 57cm
Sannadaha 4-5: Bust 54cm, dhererka 60cm
Sannadaha 5-6: Bust 57cm, dhererka 63cm
Sannadaha 6-7: Bust 60cm, dhererka 66cm
Xusuusin: Haddii cunuggaagu qallafsan yahay, waxaan kugula talineynaa inaad doorato cabbir weyn, mahadsanid. Fadlan si naxariis leh u tixraac dhererka dhabta ah ee ilmahaaga iyo shaxanka cabbirka ka hor intaadan gadan/bixin.
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 35
Labbis fiican! Ku talin
Labbiskii ayaa degdeg u yimid. Tayada ayaa aad u fiican! Waxaan dalbaday cabir 6 ah 6 sano. Markii aan arkay, waxaan moodayay inay yar tahay. Ka dibna waxaan waayey gabadhaydii-xaq uun. Waxa kaliya ee aan u maleeyay inay dheeraan doonto, dabaqa. Waa hagaag, sidaas caadooyinka. Waan ka helay Ku talin
Aad u fiican, fitS si fiican
TAYO WANAAGSAN, MAHADSANID!
Ma aanan helin dharka kadib 2 bilood oo aan sugayay laakiin lacag celin ayaa si dhakhso ah loo sameeyay